भगवान गौतम बुद्ध भन्छन् कि तपाई जे सोच्नु हुन्छ त्यही हुन्छ। तपाई के सोच्नु हुन्छ, तपाई के बन्नु हुन्छ। तपाईं आज जुन राज्यमा हुनु हुन्छ, जुनसुकै ज्ञान होस जुन तपाईं सँग छ, सबै काम तपाईंको मानसिकता को कारणले हो।
हाम्रो मानसिकता हतियार हो। जसले एक व्यक्ति लाई धनी, र सफल बनाउँछ। यो हतियार हो जसले एक व्यक्ति लाई दरिद्र र असफल बनाउँछ। त्यसैले हामीले आफ्नो मानसिकता लाई धारिलो र बलियो बनाउनु पर्छ।
तब हामी हाम्रो जीवनमा सफ़ल हुन सक्छौं। यदि तपाईंले अनुमान लगाइसके को हो कि हाम्रो मानसिकताले हाम्रो जीवनमा यति ठूलो भूमिका खेल्छ। तब तपाईं सबैले यस लेखमा चार तरिकाहरू सिक्नु हुनेछ, जुन मदद्त को साथ तपाईं आफ्नो मानसिकता लाई बलियो पार्न सक्नु हुन्छ। र तपाईंको जीवन ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्।ती चार विधिहरू जानन,यो लेख लाई अन्त सम्म पढ्नुहोस्।
1. Consistantly Learning
जब हामी केहि सिक्छौं। त्यस पछि हाम्रो दिमाग खुल्छ। अनि सोच्ने क्षमता पनि बढ्छ। साथै साथ, हाम्रो मन एउटा ठाऊ मा जम्मा हुन थाल्छ।यी सबैको कारणले हाम्रो मानसिकता बलियो हुदै जानछ।
बलियो मानसिकता भएको कारणले,हाम्रो दिमाग हामीले गरेको कार्य गर्न थाल्छ यदि तपाईं त्यो काम ठीक समयमा गर्नु हुन्छ। भनने हामी लाई उसको प्रणाम मिल्ने छ।त्यस कारण हामीले आफ्नो मानसिकता लाई बलियो पार्न सधैं अध्ययन गरिरहनु पर्छ।
2. Learn To Forget Your Past
सथीहारु,हामीले हाम्रो बिगतका सम्झनाहरु बिर्सनु पर्छ ।जुन सुकै गल्तीहरू होस जुन पुरानो सम्झनाहरू गरिएका थिए।हामीले ती सबै गल्तीहरू बाट पाठ सिक्नुपर्छ।त्यस पछी बल्ल हाम्रो मानसिकता बलियो हुनेछ।
यदि तपाईंले विगतका गल्तीहरू बाट केहि सिक्नु भएको छैन भने,भविष्यमा तपाईं फेरि यस्तै गल्ती गर्न सक्नु हुन्छ।यसैले म भन्न चाहन्छु कि तपाईं आफ्नो पुरानो सम्झनाहरू बिर्सनु र तिनीहरू बाट सिक्नुहोस्,अनि वर्तमानमा यही प्रयोग गर्नुहोस्। यो गरेर तपाईको मानसिकता बलियो हुनेछ।
तपाईंले आफ्नो मूल्य आफै थाहा पाउनु पर्छ।जस्तो सुकै परिस्थिति मा तपाईं हुनुहुन्छ। त्यो परिस्थिति मा तपाईले आफ्नो मनलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। किनकि परमेश्वरले सबै मानिसलाई फरक,फरक बनाउनु भएको छ।
प्रत्येक व्यक्तिको सम्भावना फरक हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको सोचाइ पनि फरक हुन्छ। आफूलाई अरू कसैबाट कम नठान्नुहोस्,किनकि तपाईं असीमित हुनु हुन्छ।तपाईं जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
4. Learn How To Deal With Negative
तपाईंको मानसिकता लाई बलियो राख्न,तपाईं नकारात्मकत बाट टाढा रहनु पर्छ।किनभने जब तपाईं नकारात्मक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध गर्नुहुन्छ,भने तब तपाईं केवल गलत काम मात्र सिक्नुहुन्छ। र उनीहरूसँग समय बर्बाद गरेर, तपाईंको उत्पादकता धेरै कम हुन्छ। यसरी गरेर तपाईको मानसिकता कमजोर हुन्छ।तपाईंले नकारात्मकताबाट टाढा रहनु पर्छ।तपाईं बुद्धिमान व्यक्तिहरूसँग मित्र हुनुपर्छ, तिनीहरूसँग समय बिताउनुहोस् त्यसपछि मात्र तपाईंको मानसिकता बलियो हुनेछ।
यदि तपाईंलाई लेख मनपर्‍यो भने, तपाईंको साथीहरूलाई साझा गर्नुहोस् र तपाईंको विचारहरू टिप्पणी गर्नुहोस्।यदि तपाईंसँग केहि समान जानकारी छ जुन तपाईंले अरु व्यक्तिहरू सम्म पुराऊन चाहनु हुन्छ भने, तपाईंले चाहि हामीलाई तपाईंको नाम र फोटो पठाउन सक्नुहुनछ र हामीले तपाईंको लेखलाई तपाईंको नाम मा www.lovelumbini.com वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नेछौं। धन्यवाद
One thought on “Right Mindset strong mindset”
ShareTweetSharePin0 Sharesसुशांत सिंह को सुसाइड मामला मा संजय लिला भन्साली को बांद्रा पुलिस स्टेशन मा3घण्टासम्मा सोधपूछ पछि कम्तिमा एक घण्टा, जून9डिसीपी अभिषेक त्रिमुखे ले सांताक्रूज पुलिस स्टेशन म पनि सोधपूछ गरेको हो। संजय लीला भंसालीको भनाई अनूसार, सुशांत सिंह सित वर्ष 2016 पछि ऊनि सितकुरा भएको […]